Fashion ibhulukwe Spring-Summer 2013
Ngemva ebusika eside ekusweleni kunalokho ukususa zonke izinto ukuze wenze isikhala ukukhanya entwasahlobo izingubo, ezihlukahlukene begqoke izingubo neziketi. Nokho, ukuthandwa ibhulukwe entwasahlobo nasehlobo akuyona encishisiwe. Imibala egqamile, inala imiklamo nokuma ukudala, isithombe esisha efudumele, ayikuthandi ebusika. Abaklami ukunikela inala ibhulukwe ukuthi ziyojabula zonke omele wobulili fair.
On umbuzo lokho - fancy ibhulukwe abesifazane le eze isizini entwasahlobo-ihlobo, nabaqambi abavumelani.
Ezinye zazo wabiza abesifazane ukukhetha lula nenduduzo, futhi ukuba banake ngokwanele imodeli khulula. Ngokwesibonelo, e-"ubhanana" owaziwa - ibhulukwe nemfashini ukuthi ziningi. Engingakusho nje kaka phezulu, okwenza hip zibukeke aluhlaza ngaphezulu, ngokushelela tapers downwardly. Umhlangano engenhla kwenza imodeli njengabesifazane kanye nasezintweni okuhlalwa okusezingeni eliphezulu igcizelela okhalweni mncane.
Iningi lo oyintandokazi "amapayipi" abesifazane, egcizelela ngokuvumelana - ibhulukwe imfashini zabesifazane, thatha niche kahle esikhulu. Ziyakwazi ikakhulukazi efanelekayo amantombazane encane, futhi esetshenziswa abaklami abaningi umcibisholo imilenze zibukeke bude. Okukhathaza nakakhulu babe imodeli ufushanisiwe, esasile kokuvula iqakala.
Ungahlali ngaphandle ukunakwa wathola udumo kuleli ngesizini edlule slacks. Ngokuyinhloko, abaklami igcile wamaphaphu izicubu, udala ibhulukwe ukukhanya nemfashini ukuthi ngeke ziphazamise ukunyakaza futhi efanelekayo ehhovisi okunzima noma i ukungcebeleka kusihlwa eduze ukuvakasha.
Ngezikhathi zasehlobo zihlale ngokuchichima ujabule imibala egqamile kanye ukukhanya, Indwangu ayevumela. Lokho futhi bheka ibhulukwe imfashini. Kunezinhlobo ezihlukahlukene imibala Baye bangeniswa akhawunti yibo bonke nabaqambi: ehlobo 2013 catwalk wagcwala ezinemibala egqamile kanye yezicathulo ezimibalabala. Nokho, abalandeli zabuna futhi - esiqinile shades omnyama ezithambile beige, nabaqambi futhi ube yiyo.
ukotini Izacile, chiffon nosilika ohlangene - nezicubu ziphelelwe mncintiswano. Lokho izinto ezinjalo ukunikela anhlobonhlobo. Beautiful bebodwa, imifanekiso insimbi-free, baya amagagasi bushelelezi ukuthi zithonye ngesikhathi ehamba nalapho umoya futhi ngaleyo ndlela ukudala emnene kakhulu, hhayi ugcwale drapery isithombe.
Isikhumba manje ukuthi isizini ilandelana uwina yesikhulumi futhi izinhliziyo abesifazane emhlabeni wonke. Abaklami ziya ziba mandla ekusebenziseni le nto. ibhulukwe Esincane imfashini - imodeli ezivamile, eyenziwe lesikhumba esihle ngemibala ehlukene: kusukela tratsiditsionnyh kule nto ku-olintshi omnyama obomvu kanye namanzi. amaphethini ehlotshisiwe, izipikili namacici, lesikhumba ibhulukwe, kuhlangene ogibele ethule ukudala ensembles egqamile futhi fresh.
Ngaphezu kwalokho, isikhumba sisetshenziswa kabanzi amaphethini khulula. Kunikeza abafundi ukuzinza - sibonga ibhulukwe lakhe ube nohlobo ecacile.
Bright izinkumbulo - kukhona ibhulukwe entwasahlobo-ihlobo 2013. Ababona ingxenye yesithombe, osekelwe kuyo, gqamisa, amehlo ekhethekile.
Cap, isigqoko, Bandana hook - imivimbo langempela isizini ihlobo
Yini ushayele ingubo Uzbek? Uzbek ingubo kazwelonke: izithombe
Amathimba wethebula etafuleni azohlala esiza ukwenza okulungile
Nhlobo Space: Life the Moon
Isikhumba leggings: kanjani ukuba ukhethe futhi yini okufanele uyigqoke
Ngingaba ukuqoqa converters imvamisa ngezandla zabo? Umgomo we operation kanye wiring idayagramu imvamisa converters
Yokuhamba Blanc, umsebenzi nenjongo yayo